Soosaarayaasha cusub Shiinaha Alaabooyinka Alaab-qeybiyeyaasha & Warshad
Cover 3D silikoon wajiga maaskaro wajiga loogu talagalay Maaskarada Xaashida
Faa'iido: Taageero isku dhejisan oo ku dhegi kara wax kasta oo siman, oo adag. Noqo mid deg deg ah oo sahlan in la beddelo astaamaha maaddaama ay tahay xayeysiinta adoo adeegsanaya birlab xoog leh. Waxaa laga akhrisan karaa labada dhinac marka aad ku dhegto dusha muraayadda oo labada dhinacba ay u muuqdaan dusha sare adigoon ka harin haraaga marka aad ka saareyso. Muuqaalka kaamil ah, qaabka calaamadda ayaa dib loo dhigi karaa. SAHAL IN LA ISTICMAALO: Qalab looma baahna. Kaliya ka xoq warqadda difaaca dambe ee cad -Ku dheji - Calaamaddaada gudaha. Xadhigga birlabta ee xoogan ...
Caws silikoon dib loo isticmaali karo, dhumuc silikoon dheer oo jilicsan oo burushka nadiifinta ah, oo ku habboon 30 wiqiyadood oo weelal ah-BPA oo bilaash ah
Midabada waa quruxsan yihiin, silikoonku waa jilicsan-fududahay in la leexiyo, way fududahay in la jaro dhererka la rabo. Awood u leh inuu si fudud ugu nadiifiyo burushka. Ku raaxayso tayada iyo deganaanshaha - Ka samaysan 100% silikoon heer cunto ah iyo BPA-la'aan. Cawska silikoonku waa mid aan sun ahayn, caag la'aan, dhadhan macaan oo bir ah, oksaydh la'aan, midab leh, weelka dhaqa oo nabdoon, dib loo isticmaali karo oo caafimaad qaba. QAYBTA BADAN & FLIEXBLITY - Cabirka saxda ah ee 30 & 20 Oz Yeti / Ozark / Rtic Tumblers. Aad ugu fiican biyaha, liinta, soodhaha ama kafee. SAFEELKA AMMAANKA ...
Mashiinka dhejiska ah ee silikooniga ah, oo loo isticmaalo qurxinta albaabada, daaqadaha iyo derbiyada, wuxuu noqon karaa looxyo sawir ah, looxyo xayeysiis ah, looxyo ogeysiis ah, waxyaabaha la beddeli karo, si fudud loo shaqeyn karo, ganacsi iyo guri, raad raaca xabagta, magnetism-ka, waxyeello u lahayn derbiga, Dhaqdhaqaaq kasta, dib u isticmaal, cabbirka caadada
1. Sixir dhegdheg jir-dheg adag oo aan lahayn 3M xabagta, magnetism lahayn, waa shey shatiyeysan, waa loo dhiman karaa-qaab kasta iyo shaqo bandhig hal abuur leh. 2. Qalabka tiknoolajiyadda sare ee buuxiya shuruudaha baaritaanka Yurub iyo Mareykanka waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro alaab cusub oo cusub. Midabada qalabka waa la habeyn karaa. 3. Muuji waxyaabaha ku jira, kuwaas oo noqon kara xayaysiisyo, ogeysiisyo, sawirro, ogeysiisyada qiimo dhimista ee dukaamaysiga, ku dhaji hadba sida ay doonaan, ha ka tagin calaamadaha xabagta, oo beddel qaabka asalka ah ee m ...